ဓာတ်ပုံခွဲဝေမှု features တွေတက် Twitter ကိုရိုး - သတင်း Rule
ဓာတ်ပုံခွဲဝေမှု features တွေတက် Twitter ကိုရိုး
Twitter ကို Facebook ကစတိုင်ဓာတ်ပုံကဆက်ပြောသည် “မှတ်သားခြင်း” နဲ့ iPhone သုံးစွဲသူများကတစ်ခုတည်းပို့စ်တွင်မျှဝေနိုငျသောရုပ်တုဆင်းတု၏အရအေတှကျထငြာ.
အဖြစ်အဖြစ်အများအပြား 10 တစ်ခုတည်းပုံရိပ်ထဲမှာလူဖြစ်နိုင် “tagged” န်ဆောင်မှုမှာ posted မက်ဆေ့ခ်ျစာသားမှ 140-ဇာတ်ကောင်န့်သတ်ချက်သို့စားသောက်မပါဘဲအမည်များနှင့်အတူ, Twitter ကိုဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာကဲသာဘုရင် Puerta ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
“ပုံထဲမှာလူ tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ဓာတ်ပုံများပျော်စရာလွယ်ကူပတ်ပတ်လည်စကားပြောဆိုမှုများကို,” Puerta ကပြောပါတယ်.
ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ tagged Twitter ကိုသုံးစွဲသူတွေဟာအကြောင်းကြားစာများရလိမ့်မည်. ပြည်သူ့ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာသူတို့ကို tag နိုင်သူနှင့်အတူအသိပေးချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, Puerta အညီ.
Facebook ကရှည်လျားလူတွေလူမှုကွန်ယက်မှာ posted ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတွေ tag ဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်.
တစ်ခုတည်း '' tweet ထဲမှာရှိသကဲ့သို့လူအမြားလေးအဖြစ်ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦး collage ပေးပို့နိုင်စွမ်း’ လည်းထွက်လှိမ့်ခံခဲ့သည်, အိုင်ဖုန်းနဲ့စတင်ပြီးနှင့် Google-Back စွမ်းအားဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်မကြာမီကတိထားတော် အန်းဒရွိုက်ဆော့ဖ်ဝဲ.
Tweets တွေကဓာတ်ပုံသည် array ဆိုထုတ်ကုန်များမှကြည့်ရှုနိုင်သည်ဖွစျလိမျ့မညျ.
အဆိုပါ feature အသစ်များ Twitter ရဲ့ smartphone ကိုလျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ built လျက်ရှိသည်.
ဤဆောင်ပါး, ဓာတ်ပုံခွဲဝေမှု features တွေတက် Twitter ကိုရိုး, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
22030	0 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး, Cozumel, Facebook က, Google က, ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်း, iPhone ကို, တံခါးပေါက်, တွစ်တာ
← အမေရိကန်ရေနံစျေးနှုန်းတွေသော့ချက်အချက်အချာမှာတင်းကျပ်ထောက်ပံ့ရေးအပေါ်မြင့်တက်လာ လေ့လာမှုအသစ်ပန်ဒါချိုမြိန်သွားဖြစ်တည်ပြီး →